Ogaden News Agency (ONA) – Barnaamijkii Aragtida Halgamaaga – 3exda Jiil (Generation) ee ku kulmay halganka waa guul hadii ..?
Barnaamijkii Aragtida Halgamaaga – 3exda Jiil (Generation) ee ku kulmay halganka waa guul hadii ..?
Barnaamijka Aragtida Halgamaaga caawa waxaan kaga hadli doonaa arima la xidhiidha 3exda jiil (Generation) ee isku soo gaadhay Halganka Gobanimadoonka ee JWXO ay hormuudka u tahay, taasoo aan horey uga dhicin taariikhda dalkeena intii ka dambaysay kacdoonkii daraawiishta ee Sayid Maxamad Cabdille Xassan.
Mawduucan oo u baahan in si cilmiyaysan looga hadlo, iyadoo waqtigii ku haboonaa lasoo gaadhay ayaa waxaa caawa Hordhaca barnaamijka inoogu marti ah mudane Cabdulaahi Ciraaqi, Isu-duwaha Jaaliyadaha Bariga Dhexe oo inooga xogwarami doonaa markuu ka baxay magaalada 1995kii oo uu ka ahaa xubnaha qarsoon kuna biiray CWXO.
Marka laga hadlayo maanta waxaa lagama maarmaan ah in dib loo jaleeco dhacdooyinkii Shalay taasoo kuu sahlaysa inaad ka hadasho maanta isla mar ahaantaana aad usii gogol xaadho Berri iyo mustaqbalka.
Waxaan ka raaligalinaynaa daawadaha duubitaanka, waxaanan ka codsanaynaa inuu u dulqaato. Xog badan oo muhiim ah inaan ogaano ayuu ka waramayaa mudane Ciraqi oo ku saabsan marxaladihii ugu cuslaa ee halgankeena uu soo maray.
Taariikhda oo ka kooban dhacdooyinkii shalay oo lasoo ururiyay waxay muhiim u yihiin mustaqbalka. Nin xakiim ah oo la weydiiyay muhiimadda taariikhda wuxuu yidhi; Kuwaan Taariikdooda xasuusan karin waxay ku xukuman yihiin inay kusoo noqnoqdaan khaladaadkay galeen. ” Those who cannot remember history are condemned to repeat it”. Philosopher George Santayana.